कहाँ पुग्यो गौचन हत्याकाण्डको अनुसन्धान ? | Seto Khabar
कहाँ पुग्यो गौचन हत्याकाण्डको अनुसन्धान ?
काठमाडौं, कात्तिक १० । निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचन हत्याको १८ दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन। २३ असोजको मध्याह्नमा शान्तिनगरमा गोली हानी गौचनको हत्या गरिएको थियो। घरबाट निस्केका गौचनमाथि आपराधिक समूहले सार्प सुटरको प्रयोग गरी गोली हानेको थियो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।